Ndeupi musiyano uripo pakati pekushambadzira nekutengesa? | ECommerce nhau
Ndeupi musiyano uripo pakati pekushambadzira nekutengesa?
Kushambadzira uye kuzivisa. Idzi ipfungwa mbiri dzinova chikamu chekushanduka kwebhizinesi, kwete izvo zveInternet chete, asi zvakare epanyama. Nekudaro, kazhinji kazhinji matavi ese ari maviri akavhiringidzika uye zvinofungidzirwa kuti iwo akafanana, kana kuti iwo anofanirwa kutenderedza zvinhu zvakafanana, ipo pachokwadi iwo asiri.
Naizvozvo, isu tinoda kukupa ruoko kuti iwe unzwisise zvatiri kureva nekushambadzira uye kushambadza, ndeapi mutsauko wavo uye izvo zviri nani pane izvo zviviri. Iwe unoda kuziva zvese here? Zvakanaka pano une ruzivo irworwo.
1 Chii chiri kushambadzira
2 Chii chinonzi kushambadza
3 Musiyano uripo pakati pekutengesa nekushambadzira
3.1 Kushambadzira kunogara kuri kushambadzira
3.2 Kushambadzira uye kushambadzira zvinotarisa pazvinhu zviviri zvakasiyana
3.3 Zvinangwa zviviri zvakasiyana
3.4 Kushambadzira uye kushambadzira hazvina kutarisa zvakafanana
3.5 Kushambadzira ndekwekudzidza, kushambadza iko kushanda
3.6 Kushambadzira uye kushambadzira kwezvinangwa zvakasiyana
4 Ndezvipi zviri nani, kushambadzira kana kushambadzira
Chii chiri kushambadzira
Ngatitangei nekutsanangura kushambadzira. Mune ino kesi, ndiyo misika yekudzidza. Mune mamwe mazwi, inobata nekunzwisisa kuti musika nevatengi vanoita sei. Chinangwa chayo ndechekuongorora iyi data kuitira kuti igadzire zano rinotendera kuwedzera kutengesa uye kugadzirisa zvese zvakanakira uye mufananidzo wechiratidzo.
Izvi zvinogara zvichiratidzwa mukufamba kwenguva, nekuti kukurudzira musika zano rinodiwa risingazoshanda kusvika mwedzi yakati wandei gare gare, kunyangwe zvisingareve kuti mhedzisiro-yenguva pfupi haionekwe (asi chaizvo akanakisa achauya nguva.).
Chii chinonzi kushambadza
Kune chikamu chayo, kushambadzira hakusi pachayo kudzidza, asi a nzira yekubatanidza iyo mhando, chigadzirwa kana kambani nevatengi. Mune mamwe mazwi, zvingave kuita kuti mutengi uyu azive izvo izvo kambani iyo yaanoda kuti azive pamusoro pavo. Chinangwa, sekushambadzira, zvakare kuwedzera kutengesa kwezvigadzirwa pamwe nekuvandudza mufananidzo wekambani.
Nekudaro, izvo iwe zvausingazive ndeyekuti kushambadzira ibazi rekushambadzira, ndiko kuti, rakapoteredzwa mariri. Izvo ndezve kugadzira meseji inonyengetedza yekubatana nevatengi uye kuita kuti vatenge kana kukumbira izvo zvinotengeswa.
Uku kushambadzira kwaimbove kuri "chaiko" nhanho, zvese mumugwagwa uye munhau. Iye zvino migero yedhijitari yakawedzerwa, izvo zviri kuwedzera kukosha uye kurema.
Musiyano uripo pakati pekutengesa nekushambadzira
Mushure mekuona izvo chaizvo zvatinoreva nekushambadzira uye kushambadzira, zviri pachena kuti imwe yemisiyano mikuru pakati pezviviri ndeyekuti mumwe "anovimba" nemumwe. Sezvatakakuudza, kushambadzira kunosanganisira kushambadzira, kana zvakafanana, kushambadzira ibazi rekushambadzira.
Nekudaro, kwete chete kuti pane musiyano uripo pakati pezviviri, asi tinogona kuwana zvimwe zvakawanda zvatichakurukura pazasi.
Kushambadzira kunogara kuri kushambadzira
Paunoona shambadziro, iwe unoziva kuti ine chinangwa chakati, kungave kutenga chigadzirwa, kuziva kambani, nezvimwe. Ndizvozvo kushambadzira kunotsvaga chinangwa chakanangana nezano rekushambadzira inobatwa.
Kune rimwe divi, mune yekushambadzira, hatigone kutaura nguva dzose nezve kushambadza. Kune dzimwe nzira dzakawanda dzekufurira vatengi kupfuura zvine chekuita nekushambadzira. Semuenzaniso, dhizaini yechigadzirwa icho, logo yekambani, nezvimwe.
Kushambadzira uye kushambadzira zvinotarisa pazvinhu zviviri zvakasiyana
Zvakanaka hongu. Zvakare, icho chinhu chisiri vazhinji vanoziva nezvazvo, asi zvinoitika.
Uye ndizvo izvozvo kushambadzira kunogara kuchitarisa pakuita kuti vatengi vaone kushambadza panguva imwechete iyo yavanotarisa pane chigadzirwa, pane sevhisi, kana pakuita kuti kambani izivikanwe.
Uye kushambadzira kunoitei? Huye, chinangwa chayo chakanangana nekutora mufananidzo wechiratidzo, chigadzirwa kana sevhisi uchinzwisisa kuti vese musika nevatengi vanozvibata sei.
Zvinangwa zviviri zvakasiyana
Isu takakuudza zvisati zvaitika kuti kushambadzira kwaive kwakavakirwa pazvinangwa zvenguva refu. Zvinoda nguva yekushandisa hunyanzvi, kuti ugadzirise kana zvikaonekwa kuti mhedzisiro inotarisirwa haina kuwanikwa, nezvimwe.
Pane kudaro, kushambadzira kuri kukurumidza. Inotsvaga kutora kutarisisa kwevatengi nekukasira, nekuti ndiyo nzira yekukwezva kutariswa. Ndokusaka mushure mechinguva kushambadzira kunofanirwa kuchinjwa, nekuti mutengi anojaira uye inomira kushanda.
Kushambadzira uye kushambadzira hazvina kutarisa zvakafanana
Nguva kushambadzira kune basa rekuongorora musika, vatengi, chigadzirwa, kugovera uye kusimudzira, kushambadza kune zvimwe zvinangwa. Mune ino kesi, izvo zvavanonetsekana nazvo chete kusimudzira kwechigadzirwa, ndiko kuti, maitiro ekuita kuti isvike kune vatengi.
Asi zvese zviri pamusoro zvinosiya.
Kushambadzira ndekwekudzidza, kushambadza iko kushanda
Uye ndiko kuti kushambadza pachako kudzidza. Izvo zvinotora mukufunga zvinhu zvakawanda kuti uwane zvauri kutsvaga. Asi kushambadza chikamu chemhedzisiro iyi. Icho chiito chechidzidzo ichocho chakaitwa kare.
Kushambadzira uye kushambadzira kwezvinangwa zvakasiyana
Kufunga nezve kushambadzira mushure mezvese zvatakaudza kwauri kufunga nezve chidzidzo uko kwese zvinhu zvine chekuita nekambani, musika uye zvigadzirwa / masevhisi ayo aanoongorora.
Asi mune nyaya ye kushambadza, zvaunofunga nezvazvo maitiro ekukwezva mutengi.
Mune mamwe mazwi, kushambadzira kunoenderana nekuwedzera purofiti uye mukurumbira wekambani; Asi kushambadzira kunoenda zvakananga kune vako vangangove vatengi.
Ndezvipi zviri nani, kushambadzira kana kushambadzira
Mushure mekuona mutsauko uripo pakati pekutengesa nekushambadzira, mubvunzo unogona kuuya kwauri ndeupi wevaviri uri nani. Uye chokwadi ndechekuti hapana mhinduro iri nyore. Ose ari maviri akabatanidzwa uye akabatana kuti vabudirire.
Chaizvoizvo hausi kuzowana chero chinhu nekuita yakanaka yekushambadzira zano kana iwe usina kushambadzira. Uye kushambadza pachako hakuzoshanda pasina basa rekushambadzira rakaitwa zvakanaka.
Zvinorevei izvo? Zvakanaka, hapana kushambadzira pasina kushambadzira uye kushambadzira pasina kushambadzira hakuwanzo kuwana mibairo yakanaka. Muchidimbu, kana uchisarudza imwe kana imwe, unofanirwa kusarudza mubatanidzwa pakati pezviviri.
Misiyano uripo pakati pekutengesa nekushambadza iri kujekerwa kwauri ikozvino?
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Ndeupi musiyano uripo pakati pekushambadzira nekutengesa?
Chii chinonzi musika uye chinoshanda sei?